Atsaharo na ovao ny bitsika "Miaina" ao amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch dia napetraka ho iray amin'ireo vokatra tsara tato ho ato tao amin'ny Apple Ary izany no mahatonga ny fahalalana amin'ny fotoana rehetra ny fomba fiasan'izy io sy ny zavatra atolotray antsika dia tena zava-dehibe ho an'ireo rehetra izay te-hividy iray na efa manana iray amin'ireo famantaranandro maranitra Apple eo amin'ny tanany.
Ny safidin'ny Breathe an'ny Apple Watch dia tena mahaliana ho antsika izay tsy manana minitra iray haka fotoana fohy eo anelanelan'ny asa, ny fianakaviana, ny fanatanjahan-tena ary ny asa hafa isan'andro, fa ahoana kosa raha iray amin'ireo izay tsy maniry isika mampatsiahy antsika ity hetsika ity? Ahoana no tsy hampijerenao na hanovanao ny fampiasa miaina?
Ny herinandro lasa teo dia niresaka momba izany izahay maneno ary akatona izy rehetra Amin'ny fanandramana nataon'i Apple hampisehoana antsika fa tsara ho an'ny rehetra ny fanatanjahan-tena, amin'ity indray mitoraka ity ny hetsika Breathe, mety tsy ho tian'ny olona rehetra ary misy fomba tena tsotra hanovana na hanafoanana azy io mihitsy aza. Ho an'ity dia mila manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay.
Mametraha na alao ny fampahatsiahivana
Manokatra ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone izahay ary tsindrio eo amin'ny kiheba Ny famantaranandroko
Manery izahay Miaina> Fampahatsiahivana miaina
Misafidy isika Sanatria na imbetsaka araka izay tadiavintsika ampahatsiahivo izahay mba miaina sy voila
Raha misy fampahatsiahivana mifanentana amin'ny hetsika kalandrie, toy ny fotoana nifanao fotoana, dia mandeha na manao fanatanjahan-tena ianao, na ianao dia nanomboka fivoriana iray samirery, ny Apple Watch dia nandahatra ny fampahatsiahivana. Hahazo fampahatsiahivana ianao aorian'ny faran'ny hetsika na rehefa mijanona tsy mihetsika ianao mba hahafahanao manao ny roa miaraka amin'ny fotoana iray
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Vonoy na ovao ny bitsika "Miaina" ao amin'ny Apple Watch anao
Salama, efa misy lohahevitra hafa momba an'ity lohahevitra ity eto,
Ireo fampahatsiahivana tokony hampandrenesana anao dia tsy mandeha.
Tsy mahomby ny fampahatsiahivana momba ny fangatahana AINA, miantso fampahatsiahivana 6 na 7 aho ary tsy mampitandrina ahy indray mandeha na indraindray amin'ny fomba hafahafa. Tsy hitako ny antony, ary tsy ho hitan'izy ireo ao amin'ny Apple koa izany, rehefa niantso aho hampandre izany dia nanao fitsapana maro toa ny famerenana ny famantaranandro, fanovana ny tanana, famerenana ny fampiharana iPhone fiambenana sns. Ny rindrambaiko iPhone sy Watch dia havaozina.
Valiny farany avy amin'i Apple:
Misaotra anao nifandray tamin'i Apple.
Rehefa avy nandinika ny raharaham-pitsaranao tamin'ny injeniera izy ireo dia nanamafy izy ireo fa olana fantatr'i Apple izany ary misy ny fanavaozana izay azo atao mba hamahana ny olana maharitra.
Mampalahelo fa tsy misy fitsapana intsony azontsika atao dieny izao, ka hiandry isika.
Na eo aza izany, hitandrina hatrany aho amin'ny vaovao momba an'io ary hampandre anao raha vantany vao afaka aho. "
Salama indray, ndao hojerentsika raha toa ka manamboatra ny olana ny fanavaozana ny watchOS 4.2.3 omaly na raha tsy maintsy miandry ny watchOS 4.3 isika.
Eny, ny fampahatsiahivana dia mitohy tsy mandeha. Tao anatin'izay efatra andro izay dia nanana fampahatsiahivana 6 isan'andro nomanina na nasiako marika ary tsy nampandre ahy izany izy ireo.
Tsaroako: iPhone 8 miaraka amin'ny ios 11.2.6 sy Watch andiany 3 miaraka amin'ny WatchOS 4.2.3
Mbola hiandry ny WatchOS 4.3 ve isika?